‘हिजो धम्काएर चन्दा मागे, आज भोट माग्छन्’ - Ganatantra Online
दुई नेपाली युवती भारतमा बलात्कृत, चारजना माथि निर्घात रुपमा कुटपिट
सोमवार, असार १३, २०७९
दक्षिण अफ्रिकाको रात्री क्लबमा १७ जना मृत
सम्पादकीय- नेपालमै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर
घट्यो गाडी भाडा, दाङबाट कुन रुटमा कति ?
तुलसीपुरमा सामुदायिक रेडियोकर्मीलाई क्षमता विकास तालिम
शनिवार, असार ११, २०७९
कवि ओम आचार्यको ‘फूलको हार्दिकता’ लाई सरसरर्ती नियाल्दा
शुक्रवार, असार १०, २०७९
मन्त्री विमलाविरुद्ध मीनाको जाहेरीःके छ जाहेरीमा ?
मङ्गलवार, जेष्ठ ३१, २०७९
कपिलवस्तुमा बालिका अपहरण गरी बलात्कार गर्ने ६ जना पक्राउ
बिहिवार, जेष्ठ १९, २०७९
७० वर्ष नाघेपछि चुनाव लड्न रोकौं-योगेश भट्टराई
बुधवार, जेष्ठ २५, २०७९
नयाँ सोचका साथ विकास निर्माणमा लागौं- सम्पादकीय
बिहिवार, जेष्ठ २६, २०७९
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको अवस्था
भारतको हरियाणाबाट बालिकाको उद्दार गरी नेपाल ल्याइयो
‘हिजो धम्काएर चन्दा मागे, आज भोट माग्छन्’
ganatantra प्रकाशित मिती - २७ बैशाख २०७९, मङ्गलवार
‘पहिले चन्दा माग्न र हाम्रो घरबार लुट्न आउने माओवादी नेताहरु अहिले लाइन लागेर भोट माग्न आउँछन् । फकाउन खोज्छन् । हामी ती दिन कसरी बिर्सन सक्छौं र ?’
घोराही, २७ बैशाख । सशस्त्र युद्धकालमा काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुलाई धम्काएर चन्दा माग्ने माओवादी नेताहरुले अहिले उनैलाई भोट माग्दै हिडेका छन् । युद्धकालमा माओवादीले छानीछानी काँग्रेस नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई धम्कीपूर्ण भाषामा चन्दा माग्ने गर्थे । चन्दा नदिएमा अपहरण गर्ने, यातना दिने र बिस्थापित गराउनेसम्मका काम गरेका थिए ।
आज तिनै नेता स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वार भएर विगतमा सताएकै नेताहरुसँग भोटका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । माओवादी पिडितहरु भने युद्धकालमा माओवादीले चन्दा माग्न पठाएका पत्र, चन्दा नदिए पक्राउ गर्न जारी गरेका पूर्जी र चन्दा दिएका रसिद् तथा भर्पाई बोकेर बसेका छन् । ‘हिजो जसले हामीलाई दुःख दिए, आज उनैलाई भोट हाल्नुपर्ने ? हामी अहिले पुराना दुःख सम्झिइरहेका छौं । माओवादीले लेखेका चिठी खोल्दै, हेर्दै गरिरहेका छन् ।’, एक पिडितले भने ।
अधिकांश पत्रमा तत्कालीन नेताहरु इन्द्रजीत चौधरी, हेमराज शर्मा डायमण्ड लगाएतले हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँ गाउँमा उनीहरुकै निर्देशनमा पत्र काटेर चन्दा असुली गरिन्थ्यो । अहिले डायमण्ड नै घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार भएका छन् । उनले अहिले काँग्रेसकै भोटको बलमा निर्वाचन जित्ने आकांक्षा राखेका छन् । काँग्रेस नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु भने भोट माग्न आउँदा विगतमा चन्दा माग्न आएको दिन झलझली सम्झिन्छन् ।
एक पिडित कार्यकर्ताले भने,‘पहिले चन्दा माग्न र हाम्रो घरबार लुट्न आउने माओवादी नेताहरु अहिले लाइन लागेर भोट माग्न आउँछन् । फकाउन खोज्छन् । हामी ती दिन कसरी बिर्सन सक्छौं र ?’ माओवादीकै कारण आफन्त गुमाउनुपरेको, घरबास छोड्नुपरेको र जीवन नै उजाडिएका परिवार धेरै छन् । काँग्रेसलाई मुख्य बर्ग दुश्मन मानेर आक्रमणको निशाना बनाएका कारण युद्धका अधिकांश पिडित काँग्रेस नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरु नै छन् । ‘आज सत्तामा जानका लागि हामी पिडितको सहारा चाहिने ? हामीलाई यो सह्य हुन सक्दैन । देउवा र प्रचण्ड मिल्दैमा हामी मिल्न सक्दैनौं । हाम्रा घाउहरु आलै छन् ।’ एक पिडितले भने ।
माओवादी नेताहरुलाई भोट हाल्नु भनेको आफ्नो आत्मा आफै मार्नु सरह भएको पिडितहरुको भनाइ छ । ५ बर्षमा एकपटक मत दिने यो महत्वपूर्ण अवसरमा गलत राजनीतिक संस्कारबाट आएका नेताहरुलाई भोट दिन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ । ‘हाम्रो टाउको छिनाउन खोज्नेलाई अहिले कहाँ भोट दिन सकिन्छ ? हाम्रा आफन्तका आत्माले के भन्ला ? अपराधीलाई भोट दिएर सत्तामा पठाउन सकिदैन ।’ एक पिडितले दुःख पोखिन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल जारी
सम्पादकीय – व्यापार घाटा रोक्न प्रभावकारी कदम चाल
भेरी नदिमा डुबेर एक बालिका बेपत्ता
मन्त्री खत्रीलाई रातारात बुटवल पठाइयो
स्थापना दिवसमा बजार बिक्री प्रतिनिधि संघद्वारा रक्तदान
मङ्गलवार, जेष्ठ १७, २०७९
दाङमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
दंगीशरण एमाले टोल भेला संगै सभामा केन्द्रित हुँदै
शुक्रवार, बैशाख २३, २०७९
लामही– ५ रातो डाँडा एमालेमय
बुधवार, बैशाख २१, २०७९
नाँचगान, झाँकीजुलुससहित भव्यको सहभागितामा एमालेद्वारा मनोनयन दर्ता
सोमवार, बैशाख १२, २०७९
माओवादीबाट राजपुरकाे अध्यक्षमा शिखरकाे उम्मेदवारी दर्ता, उपाध्यक्षमा पुष्पा
बुधवार, जेष्ठ १८, २०७९
मङ्गलवार, जेष्ठ २४, २०७९
गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
घोराही - १५ , गणतन्त्र चोक दाङ
प्रधान सम्पादक :सबिन प्रियासन
अनलाइन सम्पादक :मुना खनाल
रिपोर्टर :शिबु खनाल
रिपोर्टर :हिमाल महरा
Ganatantra Online © 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित. Powered by Adswork Inc